DHAGEYSO:- Weerarkii Al-shabaab ku qaaden degaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaDHAGEYSO:- Weerarkii Al-shabaab ku qaaden degaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose
DHAGEYSO:- Weerarkii Al-shabaab ku qaaden degaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose
Hiiraan Xog, Sep 29, 2017:- Al shabaab ayaa weerar ismiidaamin ah ku qaaday xero ciidan oo ku taal degaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo qaasaro xoogan oo ka dhashay weerarkaas.
Dagaalkan oo mudo socday ayaa geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay iyo dad shacab ah.
Dadka deegaanka ayaa soo sheegaya in ciidamo badan oo kamid ah dhinacyada dagaalamay ay meydkooda laamiyada magaalada yaalaan.
”Hada shan qof meydkooda ayaan kor taaganahay oo dagaalka lagu dilay” sidaas waxaa yiri mid kamid ah dadka deegaanka Barire.
Waxaa laga cabsi qabaa in khasaaraha uu intaas ka badan yahay oo uu gaarayo ilaa 13 dhimasho ah iyo dhaawac ka badan intaa.
”Khasaaraha intaan waa ka badan yahay, laakiin weli ma wada ogaan karno”ayuu yiri qofka nala hadlay oo dhanka kale sheegay inuu arkay sedex qof oo shacab ah kuwaas oo dhaawac uu soo gaaray.
AlShabaab ayaa labo qarax oo ismiidaamin ah ku gashay xerada oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowlada kadibna waxaa ku xigay weerar toos ah oo ay ku qaaden alshabaab.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in daqiiqado kooban ay ciidamada Shabaab halkaas ku qabsadeen oo aysan garaneyn meel ay ukala carareen ciidamadi dowlada ee ku sugnaa xerada.
Inkastoo uusan dagaalka haatan ka dhamaaday gudaha magaalada laakiin dhawaqa rasaasta ayaa si weyn looga maqlayaa duleedkeeda.
AlShabaab ayaa guulo ka sheegtay dagaalkan, halka dhanka dowlada aysan weli wax war ah kasoo saarin dagaalka saakay ka dhacay degaanka Bariire.
Hoos ka dhagayso Goobjooge ka hadlaya dagaalka iyo khasaaraha.
AKHRISO:- Yuusuf Garaad oo qaray maqaal uu cinwaan uga dhigay ”Isteerinka Arrimaha Dibadda Soomaaliya